Abawine phambilini be-King George VI Chase - Ukuzijabulisa
2020 - Frodo
2019 kanye no-2018 - Clan des Obeaux
2017 - Kungenzeka Bite
Njengoba iKing George VI Chase ibuya emkhathizwe, ikhombisa ngempela ukuthi lo nyaka usheshe kangakanani. Ngemuva kwesizini eqinile yomjaho oyisicaba, ogcine ukwamukela izibukeli ezinkundleni zemidlalo yomjaho ngemuva kokungabikho kwezinyanga eziyi-18, i-National Hunt isibuyile engqondweni yawo wonke umuntu, ne-King George e-Kempton omunye wemijaho ehlonishwayo ekhalendeni.
Kulandela imikhawulo ye-coronavirus ngonyaka odlule, umcimbi wenzeka kuvaliwe, ngakho-ke kuzoba kuhle ukuthi i-Kempton iphinde ivule iminyango yayo futhi ivumele ababukeli ukuthi bajabulele amanye amahhashi kanye nojokhi abahamba phambili ngalolu suku lwesibhakela. Njengokujwayelekile, lindela izimo ezibandayo, izenzo eziningi, kanye nethuba lokucasuka okukhulu ngisho nakungcono kakhulu iwebhusayithi yokubheja yomjaho .
Kuke kwaba nezinqola eziningi ezishaqisayo phambilini ku-King George kanye nezintandokazi ezigomela uphondo komunye wemijaho yokugcina ka-Group One yonyaka. Sinalokho emqondweni, besicabanga ukuthi sizogijima phakathi kwabaphumelele phambilini be-King George VI Chase.
Kubukeka kushaqisa wonke umuntu lapho umuntu wangaphandle ewina umjaho ohlonishwayo, futhi bambalwa ngaphakathi eKempton abebengalindela isibhamu esingu-20/1.Frodoukuze athathe indawo yokuqala. Ukunqoba kuRyanair Chase ekuqaleni konyaka eCheltenham kwavumela ngokusobala uPaul Nicholls owayeneminyaka eyisishiyagalombili ukuthi akhe umfutho, into ayifaka ngokusobala eKing George, ebona izinto ezithandwayo.I-Black Opkanye namaChristian Williams-abaqeqeshweUkulinda Ngesineke, okwadingeka azinze okwesibili.
Nakuba kungenzeka ukuthi uqede endaweni yesithathu edumazayo kwiKing George yakamuva, eminyakeni emibili edluleUmndeni wakwa-Obeauxubengumnqobi wokubuyela emuva, ehlanganisa ishumi leminyaka ngesitayela ngomsebenzi omuhle ovela kubo bobabili u-Harry Cobden no-Sam Twiston-Davies. Nakulokhu, uNicholls wayengumqeqeshi onesibopho sokunqoba okukhulu, nokuhlangana kuka-2019 okuthakazelisa kakhulu. Ngaphambi komjaho bekubhekwe lukhulu ngoColin Tizzard oqeqeshwayoI-Lostintranslation, kodwa ukuqala kancane kwasho ukuthi wawa, wavumaUmndeni wakwa-Obeauxukugcina isicoco sakhe ngosuku olubandayo lweBoxing Day.
Kudingeka okuningi ukubuya ekwindla enkulu mayelana nokululama nomfutho. Cishe unyaka kuqhubeke ukwehla kwesithiyo e-Kempton,Ingase Ilumewayebuyile futhi eceleni kuka-Nicky Henderson wathatha iKing George yango-2017. U-Henderson wayegcwele indumiso ngengane yakhe eyayineminyaka eyisishiyagalombili ngaleso sikhathi, ethi ukudlala bekufanele kube indawo yokuqala: Kuhle ukukubuka. Ungajabulela ukubuka amahhashi njengaye imini yonke nobusuku. Uthe: Uthanda wonke ama-showmanship ahambisana nawo futhi uyathanda ukugxuma kanjalo futhi awubambe athi, 'Ngibheke'.
Into enhle ukuthi wayeyibambele phansi. Sinesikimu sethu esincane okuwukuzama ukungacindezeli ngaphambi kokugcina. Ungamazisi ukuthi okokugcina bese ungaya impilo yakho emva kwakho.
I-Ted Lasso Isizini 3: Izibuyekezo Odinga Ukuzazi Namuhla!
Isizini 4 ye-Atypical iwumbukiso Ongajwayelekile Ngempela